बाहिरियो अन्तिम परिणाम :सलमान खानसँग को-को आउँदैछन नेपाल ? यस्तो हुनेछ, कार्यक्रम (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
बाहिरियो अन्तिम परिणाम :सलमान खानसँग को-को आउँदैछन नेपाल ? यस्तो हुनेछ, कार्यक्रम (भिडियो सहित)
Kamal Sargam February 27, 2018
फाल्गुन २६ गते सलमान खान ‘द बङ्ग द टूर’ कालागि नेपाल आउँदै छन् । ओडीसी इन्टरटेन्टमेन्ट नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन खानसँगै ९० जनाको जम्बो टोली नेपाल आउँदैछन् ।
को को आउँदैछन् खानसँग ? उनीहरुको कार्यक्रम तालिका भिडियोमा